साप्ताहिक राशिफल हे’र्नुहोस् : जेठ २३ गते आईतबारदेखी जेठ २९ गते शनिबार सम्मको…… – SUDUR MEDIA
साप्ताहिक राशिफल हे’र्नुहोस् : जेठ २३ गते आईतबारदेखी जेठ २९ गते शनिबार सम्मको……
June 9, 2021 AdminLeaveaComment on साप्ताहिक राशिफल हे’र्नुहोस् : जेठ २३ गते आईतबारदेखी जेठ २९ गते शनिबार सम्मको……
मेष राशि- स्वास्थ्यमा सुधारको संकेत देखिन्छ । प्राविधिक क्षेत्र सबल रहनेछ । अध्ययन–अध्यापनमा सफलता मिल्नेछ । सामाजिक कार्यमा सहभागी भइएला । कार्यमा सफलता मिल्नेछ । कार्यमा मित्रको सहयोग पाइनेछ । लेखन र कलाको क्षेत्रमा सफलता पाइनेछ । स्थानान्तरणको योग छ । नयाँ योजना बन्नेछन् । पति–पत्नीबीचको सम्बन्ध समधुर रहला ।
वृष राशि- राजनीतिक कार्यमा मतभिन्नता उत्पन्न हुनेछ । स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ । वैदेशिक व्यापारमा अल्झन देखापर्न सक्छन् । नयाँ कामको योजना बन्नेछ । कृषि व्यवसायमा अपेक्षाकृत लाभ मिल्नेछ । साहित्यिक कार्य प्रभावकारी रहनेछ । राज्यपक्षबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त होला । मित्रको सहयोग मिल्नेछ । दाजुभाइको सल्लाहमा अल्झनमा परेका कार्य सुचारु हुनेछन् ।
मिथुन राशि- पारिवारिक सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला पर्नेछन् । व्यापार–व्यवसायमा प्रशस्त लाभ मिल्नेछ । स्वास्थ्यमा समस्या देखिएला । परीक्षाको नतिजा राम्रो आउनेछ । आकस्मिक धनको क्षति हुन सक्ने देखिन्छ । टाढिएका मित्रसँग भेट होला । शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी गरिएला । उत्पादनात्मक कार्यमा लगानी गर्नु उचित देखिन्छ ।
कर्कट राशि- सन्तानको सहयोगले महत्वपूर्ण कार्य बन्नेछन् । साहित्य क्षेत्रमा प्रगति हुनेछ । आयआर्जनमा अवरोध आउन सक्छ । वैदेशिक व्यापारमा झमेला पर्न सक्छ । उपचारमा खर्च हुनेछ । अध्ययन–अध्यापनमा मन नजाला । आफन्तसँग सम्बन्ध बिग्रिन सक्छ । विश्वास गरेका व्यक्तिले धोका दिन सक्छ, सजग रहनुहोला । दाम्पत्य जीवन सुखमय रहनेछ ।
सिंह राशि- शैक्षिक क्षेत्रको लगानीले लाभ देला । रोजगारीका अवसर मिल्नेछन् । आयआर्जनमा सुधार हुनेछ । दाम्पत्य जीवन सुखमय रहला । व्यापारमा वृद्धि र कार्यमा सफलता मिल्ला । राजनीतिक अन्योलले त ना व उत्पन्न हुन सक्छ । गरेका कार्यबाट लाभ मिल्नेछ । मान्यजनको सहयोगबाट विशिष्ट कार्यको थालनी हुनेछ । प्रेमी–प्रेमिकाबीच सम्बन्ध प्रगाढ बन्ला ।
कन्या राशि- सिर्जनात्मक कार्यमा प्रगति हुनेछ । आफन्त तथा दाजुभाइको सहयोग मिल्नेछ । प्रेमी–प्रेमिकाबीच सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ । उपचारमा खर्च हुने योग रहेको छ । अध्ययन–अध्यापनमा सुधार आउनेछ । सामाजिक कार्यमा रुचि बढ्नेछ । आम्दानीका नयाँ सम्भावनाहरू खुल्नेछन् । वैदेशिक क्षेत्रमा लगाएको लगानीबाट लाभ मिल्नेछ । जागिरमा पदोन्नति हुनेछ ।
तुला राशि- स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ । पारिवारिक मनोमालिन्य दूर हुनेछ । अध्ययन–अध्यापनमा रुचि बढ्नेछ । राजनीतिक क्षेत्रका कार्य बन्नेछन् । अचल सम्पत्ति किनबेचमा कानूनी अल्झन आउन सक्छ । सामाजिक कार्यमा सहभागी भइएला । वैदेशिक व्यापारमा मन्दी आउनेछ । शरीरको दायाँ भागको अंगको पीडाले सताउनेछ । मित्रहरूबाट अन्तर्घातको सम्भावना रहेको हुँदा सावधान रहनुहोला ।
वृश्चिक राशि- स्वास्थ्यमा समस्या देखिएला । धन प्राप्तिमा बाधा उत्पन्न हुनेछ । विशिष्ट मान्यजनको सहयोग प्राप्त हुनेछ । चिन्ता बढ्नेछ । शारीरिक दुर्बलता बढ्न सक्छ । दाम्पत्य जीवन सुखमय बन्नेछ । कृषि कार्यबाट लाभ हुनेछ । दैनिक कार्यमा अवरोधको सामना गर्नुपर्ला । व्यापार–व्यवसायमा सामान्य वृद्धि हुनेछ । रमाइलो यात्रा गरिएला ।
धनु राशि- अध्ययन–अध्यापनमा सफलता मिल्नेछ । विलासिताका सामग्री किनिएलान् । नयाँ योजना बन्नेछन् । पारिवारिक समन्वयबाट महत्वपूर्ण कार्यमा सफलता मिल्नेछ । राजनीतिक त ना व को सामना गर्नुपर्ला । मिथ्याबाट बच्नुहोला । प्राविधिक क्षेत्रको लगानीबाट लाभ मिल्नेछ । दाम्पत्य जीवन सुखमय बन्नेछ । पारिवारिक सद्भाव बढ्नेछ । वैदेशिक यात्राको योग छ । खानपिनमा सावधानी अपनाउनुहोला ।
मकर राशि- मित्र तथा प्रियजनको सहयोग मिल्नेछ । अधुरा काम बन्नेछन् । शैक्षिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ । न्यायिक पक्ष सबल रहनेछ । नयाँ कार्यको थालनी गर्ने अवसर मिल्नेछ । वैदेशिक यात्राको योग देखिन्छ । अध्ययन–अध्यापनमा सफलता मिल्नेछ । रोजगारीको अवसर प्राप्त होला । दाम्पत्य जीवन सुखमय रहनेछ ।
कुम्भ राशि- शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर मिल्नेछ । अल्झनमा परेका कार्य सुचारु हुनेछन् । शैक्षिक क्षेत्रमा प्रगति हुनेछ । सांस्कृतिक कार्यबाट सम्मान मिल्नेछ । यात्रा गरिएला । प्रेमी–प्रेमिकाबीच सम्बन्ध प्रगाढ बन्ला । व्यवसाय परिवर्तन गरिएला । स्वास्थ्यमा सामान्य समस्या देखिन सक्छ । आयआर्जनमा वृद्धि हुनेछ । राजनीतिक अन्योल कायमै रहला ।
मीन राशि- महत्वपूर्ण कार्यमा सफलता मिल्नेछ । पठन–पाठनमा सुधार आउनेछ । आम्दानीका स्रोत फेला पर्नेछन् । रमाइलो यात्राको योग छ । स्थानान्तरण हुन सक्ने सम्भावना छ । पारिवारिक सद्भाव बढ्नेछ । राजनीतिक कार्यमा अल्झन पर्न सक्छ । न्यायिक क्षेत्रको विवाद यथावत् रहन सक्छ । अचल सम्पत्तिमा विवाद उत्पन्न हुन सक्छ ।
आजको राशिफल हेर्नुहोस् : मिति २०७८ साल जेठ २६ गते बुधबार तदनानुसार ईश्वी सन् २०२१ जुन ०९ तारिख
कलाकार इकुको आश्रममा पुग्दा बिजोग देखियो । १४ जना बच्चालाई के खुवाउने ? इकु ऋणमा डुबे ! हे’र्नुहोस (भिडियो सहित)
श्री पाथिभरा माताको दर्शन गरी हेर्नुहोस् आज मिति २०७८ साल साउन २४ गते आइतबारको राशिफल….
भोलिको राशिफल हेर्नुहोस् : मिति २०७७ साल पौष १५ गते बुधबार तदनानुसार ईश्वी सन् २०२० डिसेम्बर ३० तारिख
झाक्रीले गरे फेरि अर्को चमत्कार, हेर्दाहेर्दै युवतीको शरीरबाट आ.त्मा भगाए ! हेर्नुहोस (भिडियो सहित)